Kedu ka ị ga - esi gbochie ntutu isi okpu agha? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Igwe okpu agha - otu esi edozi
Igwe okpu agha - otu esi edozi
Kedu ka ị ga - esi gbochie ntutu isi okpu agha?
Fashionmagazine.com na-atụ aro iji mmiri gbaa mmiri, dịka Oribe's Apres Beach Wave, tupu ị tinye nke gịokpu aghana Nkebintutun'akụkụ, ịgba na scrunch tupu ịdọta ya n'ime a bun na nape nke gị n'olu, mgbe ahụ, ịma jijiji mgbe ị rutere ebe ị na-aga.20bọchị 20 2017
Ya mere aga m egosi gị ụdị edozi dị iche iche m na-eji iji jide n'aka na ntutu m adịghị agbachi ma ka na-ele anya mara mma mgbe ịnyagharị. Fọdụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa ndị ọzọ, ụfọdụ na-adị mma karịa ndị ọzọ. Na njedebe, egosiri m ọkacha mmasị m kachasị mma, ngwọta kachasị dị irè, mana ọ naghị adịcha mma.
Ya mere, m ga-amalite site na ndị mara mma na mbụ. (music na-ada ụda) nke ahụ bụ ihe m hụrụ n'anya na-eme mgbe m na-anya ụgbọala n'ezie ọkụ, ma eleghị anya, m ga-eso ndị mụ na ha na-anọ. Ka anyi kwuo na m zutere ụyọkọ ndị mmadụ, dịka na ihe omume igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, na agaghị m eme ya, aga m agbanwe ntutu m ọtụtụ, mana achọrọ m ka ọ nọrọ, adịghị nkwekọrịta, ma mara mma n'otu oge.
Ya mere, akpọrọ m Jasmine nke a karịa njikọta ị nwere ike mgbe ọ dị mma karịa kamakwa m jiri nsị a, ọ bụrụ na ị banye n'ime mmiri nnu karịa ihe karịrị 30 nkeji, ntutu gị nwere ike bụrụ ọdachi. Yabụ nke a na-arụkwa ọrụ nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-ejikwu agịga. Ugbu a, anaghị m eji braids.
Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na ịkpa isi na ntutu m na ịnya ịnyịnya m anaghị eme nke ọma n'ebe ibe ha nọ n'ihi ihe ụfọdụ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ dị njọ dị ka ọdụ ịnyịnya, mana enwere m nke a, Jasmine, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nnukwu ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ na ọ bụghị oke ịnya ụgbọ ala mgbe ahụ ana m ahapụ ya n'èzí jaket m. Nke a bụ otu ị ga - esi kwuo na abụ m nwa agbọghọ mgbe m nọ n'uju, mana enwere m ike itinye ya na jaket m ka ọ nwee ike ịchebe nchebe ma jigide ntutu ka mma.
na-agba ịnyịnya ikpere
Mana mgbe m nwere ya, anaghị m ewepụ ya maka ọrụ n’oge na-adịbeghị anya, ọ na-adị mfe ma dịkwa mfe. Mgbe ahụ ntutu m na-adị mma nke ukwuu mgbe m ruru ọrụ. Ya mere, m na-atụgharị isi nke ihu ahụ ma hapụ m ka m tụgharịa ma m na-atụgharị ihe ọ bụla ọzọ na bun, kee ya agbụ.
Ma mgbe ahụ ụzọ m ga-arụ ọrụ na-ewe 30 nkeji, ọ kachasị n'okporo ụzọ awara awara, n'ezie obere. Ọ ga-abụ karịa n'ihi na m ga-agagharị ma nweta ebe ndọba ụgbọala n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na ị hụ isiokwu a, m nwererịrị ụgbọala a.
Ka o sina dị, ya mere, m na-eji olu olu m ma dọpụta ya na ihu m na n'elu bun m na nke na-egbochi eri niile n'anya m n'ihi na ọbụlagodi ntutu na-agbanye na okpu agha gị bụ ihe kachasị iwe. Ọ DỊ MMA. O siri ike ịgwa gị okwu.
Nke ahụ bụ ihe m na-eme ma m gaa ọrụ. Nke a bụ ụdị dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ nke ka na-agbagọ ntutu ihu. Ma kama agbagọ ntutu nke azụ, naanị m tinye ya na akaghị ma ka na-etinye olu n'olu.
Nke ahụ bụ ya, ihe kachasị oke nke na-adịghị mma kama ọ kachasị dị irè. Ma nke ahụ bụ ihe m na-eji na mmiri ugbu a, na naanị n'ihi na ọ nweghị ihe na-arụ ọrụ ka mma, ugbu a, m kwesịrị igosipụta nke a n'ihi na iwu chọrọ ka ị gosipụta, ọ bụrụ na ị na-eji mgbasa ozi nkwado ma ọ bụ njikọ mmekọ ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke a, nke a abụghị mgbasa ozi nkwado , obughi mgbasa ozi ma obu njikọ njikọta. Nke a bụ
Amaghị m ụlọ ọrụ ọhụụ, echere m na nke a ma ọ bụ na ọ bụ naanị, nke a dị ka nwanyị na-arụ ọrụ n'ụlọ, onye na-agba ịnyịnya ma mee nke a n'onwe ya.
Mana enweghị m ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na m mee edemede a maka ngwaahịa a, ọ ga-abụ iwu na-akwadoghị ka m gwa gị na ọ bụrụ na anaghị m, ọ bụ naanị n'akụkụ. Yabụ otu ị maara, mgbe m gwara gị na nke a bụ ihe kachasị mma na ụwa, ọ bụ nke kachasị mma m nwetagoro. Ya mere, ihe m na-eme bụ otu ihe ahụ m na-arụ maka ọrụ bụ na m na-agbagọ ntutu ihu, na-agbagọ ntutu, na-etinye ya niile azụ mgbe ahụ, m na-achọkarị iji eriri ntutu isi dị njọ, n'ihi na nke ahụ na-enyere aka karịa ntutu m ga adi nma karia ma echefuru m iweta nke ugbua. na ihe bụ nnoo dị ka a raket ákwà.
Yabụ ị nwere akpa maka ogologo ntutu gị. Emere m nke a, chere. Gbadata wee gbagoo wee kee ya agbụ ma ya dị ka nke a.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụghị ọkacha mmasị m, kama ọ na-eme ka ntutu m dị ka ọfụma na m pụtara na salonlọ Mmanya ahụ mgbe m na-anya ụgbọala ma jiri nke a ụbọchị niile. Aga m egosi gị ihe ọ dị mgbe m tinyere okpu agha m. Amaara m na m nwere uwe a na-emetụta uche, mana m yiri uwe a maka ọrụ.
Ma enwere m ogologo ọkpa m na jaket m na-eyi agha na ihe ọ bụla ọzọ m yi. Enwetara m pịịlị mịpụtara ka m wee kpughere gị okpu agha a na nwayọ nwayọ. (Nnụnnụ na-ebe ubé) Mana ozugbo m tinyere ya, ị ga - ahụ na bun na - apụ site n’azụ.
Ọ dị mma ka m kpọtụrụ onye nwe ngwaahịa ahụ wee nye m koodu iwe ego maka gị. Jiri Koodu-Doodle maka ego 10%. Ọ bụghị njikọ mmekọ.
Enweghị m nke ọ bụla n'ime ya. Ekwesịrị m igosipụta, enwere m obi ụtọ ịkpọsa na m chọrọ ịkọ otu ihe ịtụnanya dịịrị gị ụmụ nwoke nwere ogologo ntutu. Laa azụ na mbido, enwere m olile anya na ụda m na-arụ ebe a na isiokwu ahụ anaghị emehie ihe n'ihi na enweghị m ike ịme edemede a ọzọ.
Ya mere otu ugboro n’afọ ọ bụla ọ masịrị m igbutu 10 sentim n’isi m ma nyekwa Mkpọchi Lovehụnanya. Enwere m mmasị na ogologo ntutu m. Enwere m mmasị n'ụzọ m chere na m bụ naanị
Echere m na m dị mma karịa mana ọ na-ewe iwe iji nọgide na-enwe dị ka ntutu m na-agbanwe agbanwe ma sie ike. Ma otu ugboro n'afọ naanị m na-ebipụ 10 sentimita asatọ. Ma mgbe m na-edekọ nke a, ọ bụ n'ezie June.
Oge ikpeazu m bee 10 sentimita bụ Machị afọ gara aga. Yabụ, ntakịrị oge gaferela dịka ị nwere ike hụ na ọ dị ogologo mana m na-eri nri dị ka hippie wee were multivitamin. Echere m na ọ bụ ya mere o ji eto ngwa ngwa.
olee otú brek hydraulic si arụ ọrụ
N’ihi ya, m kpụrụ ntutu m, gbaa ya ọtụtụ afọ. Wayzọ m si eme ya bụ na enwere m ihe ndị a dị ka akwa mara mma, ntutu ntutu a, ọ na-adị ntakịrị nzuzu na mbụ, mana ọ ga-eto ma dị mma karịa ọnwa ole na ole. Ya mere, ka m gbaa mbọ hụ na m nwetara ma ọ dịkarịa ala sentimita iri.
Ọ DỊ MMA. Yabụ ebe mkpịsị aka m dị bụ sentimita iri na otu. Ya mere, ka m welite nke ahụ.
Oh, ka m lelee okpukpu abụọ na anaghị m egbutu ihe na-erughị sentimita 10 na mberede n'ihi na ọ ga-adị njọ. Ee, ihe karịrị 10 sentimita asatọ. Ezi, ma ọ dị ntakịrị n'akụkụ.
Ọ bụghị eziokwu? Enweghị m ike ịhụ na ọ bụ nzuzu ime nke a na-enweghị enyo, mana enweghị m ike ịlaghachi ugbu a. (Ifufe rustles) (mkpa ebipụ) Oh, ntutu m dị oke. Ọ DỊ MMA.
Yabụ na nke ahụ mara mma. Mana oh wow. Enwere m oke ọkụ Nke a bụ ụzọ ọzọ nke
Oh chim, odi m ka odi egwu. Nke ahụ bụ ụzọ ọzọ iji hụ na okpu agha na-egbochi site na inye ya otu ugboro n'afọ, na na na na chi. (ịchị ọchị) A na-enye ya otu ugboro n'afọ.
Ma ọ bụrụ na ị na-eri ọtụtụ multivitamins ma rie ya dị ka o kwere mee, ị gaghịdị
Ọ ga-abụ otu afọ wee laghachi. Ọ bụ nzuzu n'ụzọ nkịtị ọ na-aga. Ntutu isi m na-eto ngwa ngwa ugbu a.
Ma abụ m okenye. Enwere m ike ịkpụ ntutu m n'onwe m. Agaghị m enwe nsogbu ọ bụla.
Oh nwoke, agbaghara m ya. Ọfọn, olile anya ọ zuru oke maka Igodo ofhụnanya. Oge ezumike dị ka sentimita 10.
Yabụ nke a bụ ịnweghị ike iji nke a, mana o doro anya na ha na-ere dị ka obere ntutu ka ha wee nwee ike iji nke a eche m.
Ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ na-agba ịnyịnya na-achọ ịhụ ihe isiokwu banyere ịbụ nwa agbọghọ na-agba ịnyịnya na ndị ọzọ Atụmatụ na-adịghị dị ka na mgbe ahụ ị nwere ike see a playlist ebe a, m nwere ihe karịrị 100 isiokwu na m na-agbalị ịhọrọ ndị na Echere m na ọ bụ ọtụtụ ụmụ nwanyị na-etinyere aka na ya, amalitere m ịgba ịnyịnya dị ka nwa agbọghọ na-amaghị onye ọ bụla na-agba ịnyịnya. Biko debanye aha ha ma nwee olile anya na ị ga-ahụ isiokwu ndị ọzọ na-enye aka n'ezie ebe a.
Kedu otu ị ga-esi mee ka ntutu gị dị mma n'okpuru okpu ọgba tum tum?
Mgbe nọ na nke kacha mma ngwọta makaIsi okpu agha, karịsịa ogologontutu, bụ iji ịchafụ ahụ dị ka tube zuru ezu ebe ị na-etinye ya dị ka ntutu isi ma dọpụta ọkpọkọ ahụ azụ niile kantutubụ site na ọkpọkọ. Womenmụ nwanyị nwere ike ịhapụ ya dị ka ọ dị ma ọ bụ kee ya na njedebe, ọ naghị egbochi yaokpu aghaliner.Ọnwa Ise 7, 2015
Kedu ka ndị nwoke si emeso ntutu okpu agha?
Tozọ Isi Zere 'Okpu Isi'makaYsmụ okorobịa?
Jirintutuputty maka njide siri ike.
Gbanwee ka aokpu aghanwere 'nhichapụ' dị elu
Gbalịa akpa ikukuokpu agha.
Hapụ mgboko ma ọ bụ ahịhịa n’ọfịs ma ọ bụ n’akpa gị.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla dara, gbanwee nke gịedozi isi!
Kedụ ka m ga - esi gbochie ọgịkpa m ikpu okpu agha?
E nwere ihe abụọ i nwere ike ime tupu a ride kazereinwe griizbangsplasta n'egedege ihu gị mgbe ị na-ewepụ gịokpu agha.
Gbaa mbọ hụ nabangsdị squeaky dị ọcha. Na-asa ha ụtụtụ nke njem ahụ wee kpoo ha kpamkpam.
Mee ka ọkpọiso dị ọcha.
Eprel 26 2020
Okpu agha nwere ike ime ka isi nkwọcha?
Dr Kaur: Mba, egosighi ya na ahụike naokpu agha ga-eduga na ntutu. Otú ọ dị, yiokpu aghamaka ogologo ogenwere ikemepụta nchegbu gbasara ịdị ọcha n'ihi ọsụsọ na nke kachasị mkpa ọ na-eduga na dandruff na traction mgbe niile na mgbọrọgwụ ntutu na-eduga na tractionalopecia.June 21. Dec 2019
Okpu okpu agha na-eme ka ntutu daa?
Mgbe ị na-eyi ihe adịghị mmaokpu agha, mgbọrọgwụ gịntutunweta ugboro ugboro. Nsogbu a na-eme ugboro ugboro n'isi gị nwere ikedurunke nta nke ntantutu isi. Ọrịa a na-akpọkarị tractionalopecia.Jenụwarị 19 2021
Kedụ ka ị ga - esi kpu okpu agha na - enweghị ntutu gị?
Can nwere ike iburu obere ntutu ma ọ bụ mbo ntutunagị.Wereapụ gịokpu aghana ákwà ma ọ bụ ntutu isi na ahịhịa gịntutuntakịrị ma ọ bụ i nwere ike ime nke ahụnaaka gi. Okwesighi ibu nsogbu iji dozie yaIsi okpu agha. Ọfọn, ugbu a ịkwesighi ịmekọrịtanwere ntutu ntutuoge ọ bụla ịnaraapụ gịokpu agha.
lee anya Delta akpụkpọ ụkwụ
Kedu ka m ga - esi mee ka ntutu m ghara ịdalata mgbe m kpu okpu agha?
Jidenke gintutuidiocha na tangle-free n'okpuru gịokpu aghaa braid. Akpa, ịgba gịntutu naihe ịgba mmiri ma ọ bụ ederede ederede, wee kpoo ya n'ụdị ị họọrọ. Ijigbochiemkpọchi gịsite nana-enwe frizzy, na-atụgharị braid ahụ na obere ala, naanị maka njem ahụ.Ọnwa Ise 26, 2015
Nwa okpu na-eme ka ntutu ghara ịdị?
Mgbe nne na nna kpebiri ka hanwadabara na TiMband, ọtụtụ na-eche maokpu aghaga-emetụta hanwa ntutu isi. Azịza dị mfe bụ ee, ma anyị na-ahụuto ntutuọ dị ka ọ ga - eme ngwa ngwa mgbe ị na - eji TiMband.June 21. 2017 Nọvemba
Kedu ka ndị nwoke si ekpu okpu agha n'emebighị emebi?
Yiri uweUwe isi ma ọ bụ Skitcap
Ihe ọzọ ị nwere ike ịnwale bụyia isi sock ma ọ bụ ikpa efe skullcap n'okpuru gịokpu agha. Anyị na-aghọta nke a obere 'mma' nhọrọ. Agbanyeghị, ịnwere ike idobe nke gịntutuna-adị mma. Nanịịkenke gintutu,tinye naisi sock ma ọ bụ skullcap, na gịntutukwesịrị ịnọ otu ebe.09.08.2018
Kedụ ka I kwesiri isi were ntutu gị mgbe ị na-agba ọgba tum tum?
Tuckntutuna okpu agha gị ma ọ bụ “Gbaa ịnyịnyaKpodoro isi ala'
Bendụ kwụ ọtọ mgbe ị na-etinye okpu agha gị. Chịkọta ya na ihe na-agaghị eburu ọnụ ụlọ dị ukwuu n'ime okpu agha gị, dịka scrunchie ma ọ bụ isi mkpuchi ọzọ dị nro nke ga-anọ ebe. Mgbe ahụtieya niile elu gị isi nanọkwasi.18.02.2021